मान्छेमा तीन किसिमको दुःख: कसरी उत्पन्न हुन्छ ? » देशपाटी
मान्छेमा तीन किसिमको दुःख: कसरी उत्पन्न हुन्छ ?
सांख्य दर्शनले नै दुःख जीवको स्वभाविक गुण होइन भन्छ । किनकि जुन गुण स्वभावबाटै हुन्छ, त्यो गुणीबाट अलग हुन सक्दैन । दुःख जीवको स्वभाविक गुण होइन । -अनलाइनखबर